Bit By Bit - အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်း Creating - 5.4.2 PhotoCity
PhotoCity ဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းအတွက် data တွေကိုအရည်အသွေးနှင့်နမူနာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သော Flickr နဲ့ Facebook မှာအဖြစ် Website များမိမိတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူဓါတ်ပုံတွေကိုဝေမျှဖို့လူတွေကို enable, သူတို့သည်လည်းအခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ဓါတ်ပုံများ၏ကြီးမားသော repositories ကဖန်တီးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, Sameer Agarwal နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက (2011) မြို့သူမြို့သားတစ်ဦးကို 3D ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုဖန်တီးရန်ရောမ 150,000 ဓာတ်ပုံများကို repurposing အားဖြင့် "တစ်နေ့အတွက်ရောမမြို့ Build" ဤဓာတ်ပုံများသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ တချို့အကြီးအကျယ်ရိုက်ကူးအဆောက်အဦး-ထိုကဲ့သို့သော Coliseum (ပုံ 5.10) အဖြစ်အဘို့ဖွသုတေသီများတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအောင်မြင်သောခဲ့ကြသည်, သို့သော်အများဆုံးဓါတ်ပုံ unphotographed အဆောက်အအုံတွေ၏ဝေမျှထွက်ခွာ, တူညီတဲ့အထင်ကရအမြင်များကနေခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ကြောင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးခံစားခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ repositories ကကနေပုံရိပ်တွေကိုလုံလောက်အောင်မပေးခဲ့သညျ။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့စေတနာ့ဝန်ထမ်းလျှင်သူတို့အားပြီးသားရှိနိုင်ပါကြွယ်ဝစေရန်လိုအပ်သောဓာတ်ပုံများစုဆောင်းရန်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ခံရနိုင်မည်နည်း အဆိုပါ readymade ပုံရိပ်တွေ custommade ပုံရိပ်တွေအားဖြင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံနိုင်ပါလျှင်အဘယျသို့, အခနျး 1 မှာပြန်လည်အနုပညာတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖို့စဉ်းစားနေပါသလား
စီမံကိန်းကနေ 2D ပုံရိပ်တွေ၏ကြီးမားသောအစုံကနေ Coliseum တစ် 3D ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအဆိုပါတြိဂံဓာတ်ပုံများခေါ်ဆောင်သွားရာကနေတည်နေရာများကိုကိုယ်စားပြု: 5.10 ပုံက "နေ့အတွက်အဆောက်အဦးရောမမြို့။ " ။ ၏ html version ကိုထံမှခွင့်ပြုချက်အားဖြင့်ပြန်ထုတ်လုပ်ခြင်း Agarwal et al. (2011) ။
ဓါတ်ပုံများ၏ကြီးမားသောနံပါတ်များ၏ပစ်မှတ်ထားစုဆောင်းခြင်းကို enable ရန်အလို့ငှာ, Kathleen Tuite နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ, တစ်ဦး Photo-အပ်လုဒ်တင်ဂိမ်း PhotoCity တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ PhotoCity ဒေတာစုဆောင်းခြင်း-အပ်လုဒ်တင်ဓာတ်ပုံများ-သို့အဖွဲ့များ, ရဲတိုက်များနှင့်အလံနှငျ့ပတျသကျသောဂိမ်းကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှု (ပုံ 5.11) ၏အလားအလာလောကီတာဝန်လှည့်နှင့်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုတက္ကသိုလ်များတစ် 3D ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုဖန်တီးရန်ချထားခဲ့သည်: ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်နှင့်တက္ကသိုလ် ဝါရှင်တန်၏။ သုတေသီများအခြို့သောအဆောက်အဦးကနေအမျိုးအနွယ်ကိုဓါတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ခဲ့တယ်။ ထို့နောက်တစ်ဦးချင်းစီကျောင်းဝင်းအပေါ်ကစားသမားတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၏လက်ရှိပြည်နယ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်နှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတိုးတက်ကြောင်းပုံရိပ်တွေတင်မှတ်ရရှိခဲ့သည်။ (ကော်နဲလ်မှာ) URIs စာကြည့်တိုက်၏လက်ရှိပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအလွန် patchy ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးကစားသမားကအသစ်ကဓါတ်ပုံတွေတင်အချက်များကိုဝင်ငွေနိုင်ဘူး။ ဒီအပ်လုဒ်တင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှစ်ဦးကအင်္ဂါရပ်တွေကိုအလွန်အရေးကြီးလှသည်။ ပထမဦးစွာကစားသူတစ်ဦးလက်ခံရရှိအမှတ်အရေအတွက်ကို၎င်းတို့၏ဓါတ်ပုံကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမှဆက်ပြောသည်သောငွေပမာဏအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်မှာအပ်လုဒ်လုပ်ထားခဲ့သည့်ဓါတ်ပုံများသူတို့အတည်ပြုနိုင်သောကြောင့်လက်ရှိပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့်အတူထပ်ရတယ်။ အဆုံး၌, သုတေသီနှစ်ဦးစလုံးကျောင်းအပေါ်အဆောက်အအုံက high-resolution ကို 3D မော်ဒယ် (ပုံ 5.12) ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။
ပုံ 5,11: PhotoCity (ဆိုလိုသည်မှာ, ဓါတ်ပုံများကိုလွှတ်တင်) ဒေတာစုဆောင်း၏အလားအလာလောကီတာဝန်လှညျ့ဂိမ်းတစ်ခုထဲသို့လှည့်။ ကနေခွင့်ပြုချက်အားဖြင့်ပြန်ထုတ်လုပ်ခြင်း Tuite et al. (2011) , ပုံ2။
ပုံ 5.12: အဆိုပါ PhotoCity ဂိမ်းပါဝင်သူများဖြင့်တင်ထားသောဓာတ်ပုံများကို အသုံးပြု. အဆောက်အဦများ၏အရည်အသွေးမြင့် 3D မော်ဒယ်များကိုဖန်တီးရန်သုတေသီများနှင့်သင်တန်းသားများကို enabled ။ ကနေခွင့်ပြုချက်အားဖြင့်ပြန်ထုတ်လုပ်ခြင်း Tuite et al. (2011) , ပုံ 8 ။
ဒေတာ validation ကိုများနှင့်နမူနာ: PhotoCity ၏ဒီဇိုင်းကိုမကြာခဏဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းမှုအတွက်ပေါ်ထွန်းနှစ်ခုပြဿနာများကိုဖြေရှင်း။ ပထမဦးစွာ, ဓါတ်ပုံများအပေါင်းတို့သည်လမ်းကိုပြန်သုတေသီများများဖြင့်တင်ထားသောသောအမျိုးအနွယ်ကိုဓါတ်ပုံယခင်ဓါတ်ပုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအလှည့်၌ရှိသည့်ယခင်ဓာတ်ပုံများ, ဆန့်ကျင်ကသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ built-in redundancy ၏အခြားစကားများတွင်ကဖြစ်စေမတော်တဆသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ, မှားအဆောက်အဦး၏ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို upload တင်မှတစ်စုံတစ်ဦးအဘို့အလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါကဒီဇိုင်းကိုအင်္ဂါရပ်စနစ်ဆိုး data တွေကိုဆန့်ကျင်ကိုယ်တိုင်ကကာကွယ်ပေးကြောင်းဆိုလိုသညျ။ ဒုတိယ, အမှတ်ပေးစနစ်ကသဘာဝကျကျတန်ဖိုးအရှိဆုံး-မဟုတ်အရှိဆုံးအဆင်ပြေ-ဒေတာစုဆောင်းရန်သင်တန်းသားများကိုလေ့ကျင့်သင်ကြား။ တကယ်တော့ဒီမှာကစားသမားကို ပို. တန်ဖိုးရှိသောဒေတာစုဆောင်းဖို့ညီမျှသည်အရာ, ပိုရမှတ်ဝင်ငွေနိုင်ရန်အတွက်သုံးပြီးဖော်ပြထားသောနည်းဗျူဟာတချို့ရှိနေပါတယ် (Tuite et al. 2011) :
"နေ့နှင့်အချို့သောဓါတ်ပုံတွေကိုခေါ်ဆောင်သွားသောအလင်းရောင်၏အချိန်ဆုံးခနျ့မှနျး [ငါဖို့ကြိုးစားခဲ့]; ဒီဂိမ်းအားဖြင့်ငြင်းပယ်ခံရတားဆီးကိုကူညီလိမ့်မယ်။ သူကပြောပါတယ်နဲ့အတူလျော့နည်းနှိုင်းယှဉ်, ငါ့ဓါတ်ပုံတွေကနေဂျီသြမေတြီအထဲကဂိမ်းကိန်းဂဏန်းကကူညီပေးခဲ့သောကွောငျ့, မိုးအုံ့ရက်ပတ်လုံးဝေးထောင့်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ကြသောအခါအားဖြင့်အကောင်းဆုံးကြတယ်။ "
ကနေသာခဲ့သည့်အခါ "ငါကအထူးသဖြင့်ဇုန်တစ်ဝိုက်လမ်းလျှောက်နေစဉ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဓါတ်ပုံကိုယူခွင့်ပြုပါငါ့ကင်မရာကိုရဲ့ anti-တုန်လှုပ် features တွေကိုအသုံးပြုသွားမည်။ ဒါကငါ့ချဲ့မနေတော့ရပ်တန့်ဖို့မစဉ်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာဓါတ်ပုံယူခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဆုကြေးငွေ: လျော့နည်းလူတို့သည်ငါ့မှာငေးကြည့် "!
"တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးတနင်္ဂနွေအစို့အပေါ်5gigs အထိတင်သွင်းဖို့အိမျလာမယ့်ပြီးတော့, 5-megapixel ကင်မရာကိုတအဆောက်အဦးအများအပြားဓါတ်ပုံတွေရိုက်ယူခြင်း, မူလတန်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမဟာဗျူဟာခဲ့သည်။ အဆောက်အဦး၏မျက်နှာအပ်လုပ်တင်ထားသည်များတညျဆောကျပုံမှကောင်းသောအဆင့်ဆင့်ထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့, တည်ဆောက်ခြင်း, ဝုဏ်ဒေသအားဖြင့်ပြင်ပ hard drive ကိုဖိုင်တွဲများပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံများ Organizing ။ "
ယေဘုယျအား, ထို PhotoCity စီမံကိန်းကိုနမူနာများနှင့်ဒေတာများရဲ့အရည်အသွေးဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းမှုအတွက်ကျော်လွှားပြဿနာများမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပြသထားတယ်။ ထို့ပြင်သူကဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းခြင်းစီမံကိန်းများကိုထိုကဲ့သို့သောသောငှက်များကိုကြည့်အဖြစ်လူတွေပြီးသားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းတာဝန်များကိုမှကန့်သတ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပြသထားတယ်။ လက်ျာဘက်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူစေတနာ့ဝန်ထမ်းများလွန်းသည်အခြားအမှုအရာလုပ်ဖို့အားပေးတိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။